Semalt को समर्पित SEO ड्यासबोर्डमा उपलब्ध उपकरणहरूको पूर्ण सूची
के हुन्छ यदि तपाइँको सबै मार्केटिंग उपकरणहरूबाट एक एसईओ अभियान को अंतर्दृष्टि जम्मा गर्ने र तिनीहरूलाई एक ड्यासबोर्डमा प्रस्तुत गर्ने एक तरीका थियो? एक ड्यासबोर्ड जसले स्वचालित रिपोर्टहरू रिपोर्ट गर्दछ र तपाईंलाई के भएको सबै थोकको एक स्टक डेक प्रदान गर्दछ, दिन भित्र र बाहिर, महिना भित्र र महिना बाहिर?
त्यहाँ छ Semalt समर्पित SEO ड्यासबोर्ड (DSD) यसले तपाईंलाई छिटो उपकरण र अन्तरदृष्टिहरूको डेक सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ। यो तपाइँको ग्राहकहरु द्वारा सीधा प्रयोग र चिम्न सकिन्छ कि तिनीहरूले मेट्रिक जाँच गर्न सक्छन् कि, तिनीहरूले चाहेको संख्या, र तिनीहरूले चाहेको सम्पूर्ण प्रदर्शन।
यो Semalt द्वारा नवीनतम प्रस्ताव हो, अनलाइन मार्केटिंग क्षेत्रको एक वैश्विक नेता, र जो एक मार्केटरको रूपमा तपाईंको कामलाई धेरै सजिलो बनाउनको लागि अवस्थित छ। हामीले Semalt ब्लगमा पहिले DSD को बारे मा बोलेका छौं, त्यसैले आज हामी यसमा उपलब्ध उपकरणहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नेछौं।
Semalt समर्पित एसईओ ड्यासबोर्ड मार्फत तपाईंको निपटानमा उपलब्ध उपकरणहरूको पूर्ण सूची यहाँ छ:
१. गुगल SERP विश्लेषण
कसले पनि म्यानुअल SERP जाँचहरू गर्छ?
SERP विश्लेषण प्रक्रियालाई स्वचालित गर्न र वास्तविक अभियान कार्यान्वयनको लागि त्यो समय प्रयोग गर्ने समय हो। Semalt को समर्पित SEO ड्यासबोर्डको साथ, तपाईं केवल तपाईंले ट्र्याक गर्न चाहानु भएको सबै कुञ्जी शब्दहरू घुसाउन सक्नुहुन्छ, र प्रणाली तपाईंलाई आवश्यक सबै जानकारी दिनेछ। श्रेणी, दिन, हप्ता, र महिना अनुसार रैंकिंग परिवर्तन, URL हरू, खोज मात्रा, र लोकप्रियता।
गुगल SERP विश्लेषण फीचरले तपाईंलाई देखाउँदछ कि यदि तपाईंको अभियानहरू काम गरिरहेको छ, कुन सामग्री टुक्राहरूले रैंकिंगलाई मद्दत गर्दछ, र कस्तो संख्याको ब्याकलिink रणनीति तपाईंलाई ती संख्याहरू बढि धक्का गर्नको लागि अधिक चाहिन्छ।
चित्र १ - समर्पित एसईओ ड्यासबर्ड परिणामहरू देखाउनका लागि सफा ईन्टरफेस थियो।
एक्सेल स्प्रिडशिटहरू पाउनुहोस् र सफ्ट ईन्टरफेसमा SERP नतीजाहरू प्रदर्शन गर्नुहोस् जुन पढ्न र नाप्न सजिलो छ।
२. स्वचालित टेक्निकल एसईओ अडिट प्रणाली
यहाँ अब तपाइँ के गर्नुहुन्छ: पृष्ठ स्पीड मुद्दाहरूको विश्लेषण गर्न पेजस्पेड इनसाइट उपकरण प्रयोग गर्नुहोस्, सामग्री मुद्दाहरू बुझ्नको लागि सामग्री अडिट उपकरण प्रयोग गर्नुहोस्, र सामग्री, UI, र UX मुद्दाहरूको जाँच गर्न सामान्य म्यानुअल निरीक्षण।
के हुन्छ यदि हामीले तपाईंलाई भनेको हो कि यि सबै एकल ड्यासबोर्ड मार्फत स्वचालित र गर्न सकिन्छ?
तपाईंले हामीलाई विश्वास गर्न सक्नुहुनेछ किनभने त्यो वास्तवमा समर्पित SEO ड्यासबोर्डले गर्ने गर्दछ। यहाँ तपाईं एक वेबसाइट को पूर्ण चित्र र यसको एसईओ गुण देख्न सक्नुहुन्छ। हामी ब्याकलिink्क प्रोफाइल, आन्तरिक लिंक संरचना, पृष्ठ गति, पुनःनिर्देशन र 4०4 त्रुटिहरू, मेटा डाटा जानकारी, आदि कुरा गर्दैछौं। अनुकूलन हुन आवश्यक सबै कुरा तपाई र तपाईंको ग्राहकलाई जाँच गर्न र सुधार गर्न ड्यासबोर्डमा फेला पार्न सकिन्छ।
तेस्रो-पार्टी उपकरणहरू जस्तै Ahrefs वा SEMrush लाई मोटा सदस्यता शुल्क तिर्नु पर्दैन। वेबसाइट विश्लेषकहरूको आवश्यक छैन। तपाई सबै चीज एकल प्लेटफर्ममा पाउनुहुन्छ। र सबै भन्दा राम्रो पक्ष हो कि तपाइँको ग्राहकहरु यो जानकारी सीधा हेर्न को लागी तपाइँ तिनीहरु लाई प्रस्तुत गर्न को लागी।
Web. वेबपृष्ठ विश्लेषक
यो मुख्य वेबसाइट अडिट उपकरणको उपसेट हो। यसले तपाईंलाई विशिष्ट पृष्ठहरूको बारेमा जानकारीको प्रत्येक टुक्रा दिन्छ र तपाईंलाई ती तरीकाले देखाउँदछ जुन तपाईं यसलाई अझ अनुकूलित गर्न सक्नुहुन्छ।
उदाहरणको लागि, यदि तपाईंको साइटमा अवतरण पृष्ठ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पृष्ठ हो भने, Semalt को डीएसडीले त्यो पृष्ठ विश्लेषण गर्दछ र सुझावहरू प्रदान गर्दछ कि कसरी तपाईं यसलाई सुधार गर्न सक्नुहुन्छ। यो पृष्ठको मेटा विवरण अपडेट गर्ने वा CTA हरूलाई बाउन्स रेट घटाउन चारै तिर सार्ने जत्तिकै आधारभूत हुन सक्छ।
Spe. गति परीक्षण उपकरण
गति परीक्षणहरूको बारेमा धेरै कुरा भनिएको छ। वेबसाइटहरूको FCP र FMP जाँच गर्दै र गति सुधार गर्न सानो परिवर्तनहरू गर्दै। जबकि पृष्ठ गति जाँचकर्ताहरूले तपाईंलाई यो डाटा पहिले नै दिन्छन्, समाधान प्रायः अस्पष्ट वा फराकिलो हुन्छ।
यदि तपाईं एक गति जाँच चलाउन समर्पित SEO ड्यासबोर्ड छनौट गर्नुहुन्न भने। यसले तपाईंलाई के काम गरिरहेको छैन र के काम गरिरहेको छ त्यसको विस्तृत सारांश दिनेछ। तपाईं आफ्नो टेक टोलीसँग सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि आवश्यक परिवर्तनहरू गर्न। Below० भन्दा मुनिको कुनै चीजको गति रेटिंग तपाईंको वेबसाइटको एसईओको लागि राम्रो छैन।
Pla. चोरी साहित्य जाँचकर्ता
एसईओ को सब भन्दा महत्वपूर्ण पक्ष को एक अद्वितीय सामग्री हो। विशिष्टता बिना, तपाईंको वेबसाइट SERPs मा संघर्ष गर्न गइरहेको छ। किन यो सुनिश्चित गर्नु महत्त्वपूर्ण छ कि तपाइँको सबै सामग्रीहरू अनौंठो छन् र त्यहाँको भीड भन्दा फरक छ।
यदि तपाईं स्वतन्त्र सामग्री वा अन्य सामग्री एजेन्सीहरूबाट तपाईंको सामग्री आउटसोर्स गर्नुभयो, र तिनीहरू तपाईंलाई ग्यारेन्टी दिन्छन् कि उनीहरूको सामग्री १००% अद्वितीय छ, तपाईंले अझै जाँच र पुष्टि गर्नु आवश्यक छ। यो महँगो हुन सक्छ।
बजारमा उत्कृष्ट चोरी चोरी उपकरण भनेको कपिसकेप हो (तपाईले टर्निटिन रुचाउनु हुन्न, जो प्रायः अनुसन्धानकर्ताहरूको लागि हो) र त्यहाँ क्रेडिटको लागि तिर्न राम्रो पैसा खर्च हुन्छ। तपाईंसँग सयौं टुक्रा हुन सक्छ र ती सबै चलाउन कोपीस्केप मार्फत तपाईंको बजेट खानेछ। त्यसो भए तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ?
तपाइँ केवल Semalt समर्पित SEO ड्यासबोर्ड को लागी तपाइँको वेबसाइट को विश्लेषण र कुनै चोरी चोरी मुद्दाहरु पत्ता लगाउन दिनुहोस्। यसले सम्पूर्ण वेबसाइट स्क्यान गर्दछ र वेबमा बाहिर प्रकाशित ग्रंथहरूको साथ सामग्रीसँग मेल खान्छ। तपाईं एक विस्तृत चोरी चोरी रिपोर्ट हेर्न सक्नुहुन्छ, जुन आवश्यक छ भने परिवर्तन गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
चित्र २ - फ्रेन्च भाषामा ड्यासबोर्डको उदाहरण
SEO. SEO रिपोर्ट जेनरेटर
समर्पित एसईओ ड्यासबोर्डमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपकरणहरू मध्ये एक, यसले एक सबै डाटा सहयोग गर्दछ र तिनीहरूलाई तपाइँको ग्राहकको लागि सहज तरीकामा प्रस्तुत गर्दछ। यो मूलत: एक स्वचालित एसईओ सेतो-लेबल रिपोर्ट हो जुन तालिका र चार्टहरूको रूपमा मेट्रिकहरू सूचीबद्ध गर्दछ र एसइओ अभियान कसरी प्रदर्शन गरिरहेको छ भन्ने बारे चराको आँखा दिन्छ।
तपाइँ तपाइँको ग्राहकको आवश्यकता अनुसार यो अनुकूलित गर्न सक्नुहुन्छ। यसको अर्थ शीर्ष ल्यान्डि pages पृष्ठहरू सूचीबद्ध गर्दै, बाउन्स दरमा M-O-M परिवर्तनहरू देखाउदै, वा शीर्ष १० शहरहरू सूचीबद्ध गर्दछ जहाँ वेबसाइटले ट्राफिक पाए। विकल्प अनन्त छन् - गुगल एनालिटिक्स र एडोब एनालिटिक्स जस्तै - र तपाइँ कुन डेटा पोइन्ट देखाउने छनौट गरेर छान्नुहुन्छ।
त्यसोभए, एकचोटि तपाईंले सबै डाटा पोइन्टहरू अन्तिम रूप पाउनुभयो भने, तपाईं यसलाई आफ्नो कम्पनीको लोगो र ब्रान्डको नाममा मसला बनाउन सक्नुहुन्छ। कति सितलो!
प्रो टिप - तपाई यो रिपोर्टलाई स्वचालित पनि गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईको ग्राहकलाई साप्ताहिक वा मासिक पठाउनुहोस्।
DS. DSD प्रशासन प्यानल
यो तपाईंको DSD का लागि प्रशासक प्यानल हो जहाँ तपाईं नयाँ अभियानहरू थप्न सक्नुहुनेछ, तपाईंको सेटि customहरू अनुकूलित गर्न सक्नुहुनेछ, र तपाईंको ड्यासबोर्डमा मौलिक परिवर्तनहरू गर्नुहोस्।
यो काममा आउँदछ जब तपाईं वेबसाइटको लक्षित कुञ्जी शब्द अपडेट गर्न चाहानुहुन्छ वा डाटा पोइन्टको मापन परिवर्तन गर्न चाहानुहुन्छ।
व्यवस्थापक प्यानलमा तपाई ११ इन्टरफेस भाषाहरुबाट पनि छनौट गर्न सक्नुहुनेछ। यो अर्को ठूलो सुविधा हो जुन तपाईं प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। एक ग्राहक छ जो अंग्रेजी भन्दा अन्य भाषा रुचि? यो जाने बाटो हो।
जब तपाई Semalt समर्पित एसईओ ड्यासबोर्ड को लागी साइन अप गर्नुहुन्छ तपाईका लागि यी महत्वपूर्ण उपकरणहरू उपलब्ध छन्। यदि तपाईं प्रदर्शन खोज्दै हुनुहुन्छ भने, हाम्रोमा जानुहोस् डेमो साइट वा एक वास्तविक उदाहरण, र मार्फत स्किम। यदि तपाईंसँग अझै प्रश्नहरू छन् भने, तपाईं हाम्रो १--दिन नि: शुल्क परीक्षण प्रयास गर्न सक्नुहुनेछ र पूरा प्याकेज दुई हप्ताको लागि प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। यो Semalt DSD तपाइँको SEO व्यवसाय को लागी के गर्न सक्दछ को एक राम्रो स्वाद दिन पर्याप्त हुनु पर्छ। यसलाई बजारको कुनै पनि उपकरणसँग तुलना गर्नुहोस् - उबरसगेस्ट, अहरेफ्स, सेमब्रश, र्यान्कवाच - र तपाईले देख्नुहुनेछ किन DSD ले तपाईको बोकको लागि पूर्ण धमाका दिन्छ।
Semalt समर्पित SEO ड्यासबोर्ड तीन योजनाहरु मा उपलब्ध छ:
नि: शुल्क - १ basic-दिन परीक्षण आधारभूत कार्यक्षमतासँग मात्र।
लाइट - Semalt बाट अधिक सुविधाहरु को साथ उन्नत टेक समर्थन।
प्रो - सबै सुविधाहरू र Sext बाट 24x7 समर्थन लीडजेन सहायताको साथ।
जनवरी २०२१ सम्म, Semalt ले लगभग १ 150० समर्पित SEO ड्यासबोर्डहरू उद्योगहरूमा ग्राहकहरूको लागि सिर्जना गरेको छ। सँगै, तिनीहरू नम्बरहरू क्र andच गर्दछ र एसईओ प्रदर्शन प्रदर्शन गर्दछ, र अन्य तेस्रो-पार्टी उपकरणहरू जस्तै गुगल डेटा स्टुडियोलाई लाजमा पार्छ।
के तपाइँ तपाइँको ग्राहकलाई केहि नयाँ संग प्रभावित गर्न चाहानुहुन्छ? प्रयास गर्नुहोस् समर्पित SEO ड्यासबोर्ड आज